Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 14 September 2019	• 4 Comments
De Telegraaf dia nanova ny anarany ho lahatsoratra lafo be 'extra' ka 'premium'. Raha te hamaky an'io vaovao novokarin'ny tena io ianao dia tsy maintsy miditra voalohany amin'ireto gazety izay nanoratra ihany koa ho fankasitrahana ilay mpanefy ao amin'ny 40 / '45. Fantatsika izao fa ny ANP dia eo an-tanan'ny miliardionaly John de Mol ary […]
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 31 May 2019	• 3 Comments
Tsy hoe efa teo aho, fa tokony notaterina: ny omaly dia feno ny fampisehoana mahatalanjon'i Marco Borsato ao De Kuip. Ireo anarana goavambe ankehitriny dia tao: Davina Michelle, Maan, André Hazes, Lil 'Kleine, Armin van Buren ary angamba adinoko vitsivitsy. Nahoana [...]
Izay rehetra nanaraka ny raharaha Anne Faber ary vao haingana no nahita ny tranga Julie van Espen tany Belzika tamin'ny vaovao dia tsy maintsy nahamarika fa misy toe-javatra mitovitovy amin'izany. Raha manaraka ny fampahalalam-baovao isika, ity vaovao ity dia fahamarinana fotsiny. Raràna isika amin'ny sary izay [...]
Famoronana ny Fondation 'Fuck John de Mol's Permission Machine Foundation'
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 6 Novambra 2018	• 11 Comments
Dia izay be no nahazo valiny momba John de Mol ny fiantranareo mpihaza antsoina hoe Fanomezan-dàlana milina, izay mpitoraka blaogy maro manahirana amin'ny fitarainana ny fahazoan-dalana zo hampiasa sary, dia toa mahasoa ahy mba hanomboka ny asa mifanohitra. Na dia aorian'ny taratasy farany nosoratako tany Rosmalen Nedland aza dia tsy mbola nahazo valiny ny mpiadina, [...]
Ny ANP an'ny John de Mol, Fahazoan-dàlana momba ny fahazoan-dàlana, ny zon'ny fahazoan-dàlana dia milaza hoe 2: Rosmalen Nedland Gerechtsdeurwaarders BV
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 18 September 2018	• 7 Comments
Raha hitanao ny fomba fiasan'i ANP momba ny asa nataon'i John de Mol eto amin'ity tranokala ity, dia azonao atao ny manaraka ny fomba hanolorana ny zon'ny fahazoan-dàlana Fahazoan-dàlana Fahazoan-dàlana momba ny fanararaotana ireo sary amin'ny lahatsoratra. Efa namaky ny fanehoan-kevitra nataoko ihany koa aho (jereo eto). Ao anatin'ny dingana manaraka isika izao, amin'ny maha-toerana [...]
Ny holandey 3 malaza indrindra eto an-tany, noho izany dia tsy afaka mamitaka antsika isika
Filed in NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 9 Jolay 2018	• 6 Comments
Ny Holandey no tena mahay indrindra eran-tany taorian'ny Japoney sy ny Finns. Izany dia voafaritry ny 2016 ary ity tatitra ity dia azo jerena eto. Ny hatsarana dia hoe fantatsika koa avy amin'ny tenantsika fa mahira-tsaina isika ary tsy afaka manao na inona na inona ho antsika isika. Manana fanabeazana avo lenta izahay ary mahafantatra fa izahay [...]
Fanehoan-kevitra avy amin'ny John de Mols 'ANP copyright mpihaza mpihaza PermissionMachine.com
Filed in ANP, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 3 Jolay 2018	• 7 Comments
Omaly hariva dia nahazo valiny avy John de Mol ny ANP fiantranareo mpihaza (tahaka ny hoe ho an'ny tsy hanahirana, fa na dia) PermissionMachine.com. Ity orinasa hihaza teo Toa rehetra izay nivoaka tao amin'ny vohikala iray ny sary na ny lahatsoratra tany aloha. Nandeha tsara nandritra ny taona maro tsy nisy fanehoan-kevitra na olana [...]
Maas ao amin'ny lalàna manohitra ny filazana ny ANP an'i John de Mol sy ny "Permet Machine.com" mpihaza azy
Filed in ANP, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 1 June 2018	• 0 Comments
Taorian'ireo bokiko momba ny ANP sy ireo mpihazakazaka "mpihaza" avy amin'ny Permission Machine.com, dia tonga tamin'ny vahaolana iray aho izay afaka nanakana ny fitakiany amin'ny ho avy. Sahiko ny manampy ny sarin'i John de Mol miaraka amin'ny fatokisana, na dia azoko tamin'ny alalan'ny sary Google aza. Ao amin'ity lahatsoratra ity [...]
Fanehoan-kevitra momba ny fampiasana angon-drakitra momba ny zon'ny mpamorona sary ANP
Filed in ANP, NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	amin'ny 30 May 2018	• 13 Comments
Taorian'ilay fahatsiarovana avy amin'ny Permission Machine.com, izay noraisiko omaly tamin'ny ANP (John de Mol) momba ny zon'ny mpamorona ny sary sasany eto amin'ity tranokala ity, dia nandefa hafatra fotsiny aho. Tiako ny hizara izany ampahibemaso izany satria heveriko fa ny fihetsika dia tsy misaina sy tsy misy dikany. Mazava ho azy fa [...]
Total visits: 12.927.975